musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Kufamba kweUS: Kurambidzwa kwekufamba kweEU kunoodza moyo
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba chinhu chakakosha muhupfumi hwenyika uye zvichazodikanwa kuti uwanezve zvizere kubva mukuparadzwa kwehupfumi hwedenda.
European Commission inokurudzira zvirambidzo zvekufamba kune vafambi veUS kuenda kuEU.
Nyika zhinji dzeEU dzakasimbiswa mukushanyirwa kwakazara muzhizha rino.
US Travel inokurudzira EU kuti irambe yakavhurika kune vachengetwa vekuAmerica.
US Travel Association Executive Mutevedzeri Wemutungamiri wePublic Affairs and Policy Tori Emerson Barnes akaburitsa chirevo chinotevera pamusoro nhau iyo European Union inokurudzira kubvisa United States kubva pane yayo runyorwa rwenyika idzo marambidzo ekufambisa anofanirwa kusimudzwa:
"Ichi chiitiko chinosuwisa zvichitevera kusimudzirwa kwekushanyirwa kwakapetwa nevafambi vakabayiwa majekiseni ayo nyika zhinji dzeEU dzakasangana nadzo muzhizha rino. Kudzoka shure kunyangwe zvichitorwa mukubaiwa-chishandiso chinoshanda kwazvo kurwisa akasiyana-siyana ari kuwedzera kumativi ese eAtlantic.
“Kufamba chinhu chakakosha zvikuru muhupfumi hwenyika uye zvichazodiwa kuti mugadziriswe zvizere kubva mukuparadzwa kweupfumi nedenda iri. US Kufamba "inokurudzira EU kuti irambe yakavhurika vanhu vokuAmerica vabaiwa majekiseni, uye ichikurudzira United States kutora matanho nekukurumidza kutanga kugamuchira vanhu vakabayiwa nenjodzi uye kudzorera hupfumi hwedu hwekufamba."
Vakuru veEuropean Union nhasi yakakurudzirwa kumisa kufamba kwese kusingakoshi kubva kuUnited States seUS nhamba nyowani dzenhamba dzeCOVID-19 dzakapetwa.
Nhasi chiziviso neEuropean Council inosvika kurudziro kumatunhu makumi maviri nemanomwe ebato, ayo anochengetedza hutongi pamusoro pemiganhu yavo.
Michale K. anoti:
Svondo 9, 2021 pa 14: 15
Huye, iyo US yakatemesa iyo imwecheteyo kurambidzwa (UE isati yaita) kune vafambi vekuEurope kubva kutanga kwegore rapfuura, uye ichiripo.
Mativi ese ari maviri ari kuodza moyo.
Susan Sheats anoti:
Nyamavhuvhu 30, 2021 pa16: 42
hmmm… Ndakafunga kuti yaingova kurudziro nyika yega yega yaigona kubata sezvavanoona zvakakodzera. Italy yatove nemvumo yekudzivirira zvizere, masiki munzvimbo dzeruzhinji uye bvunzo dzisina kunaka dzecovid. Kana dzimwe nyika dzikatambira iwo marongero, iwo angave ari maviri anonzwisisika uye achibatsira kuvimbisa kuchengetedzeka kwemunhu wese. Chirevo ichi chinogona kushandurwa kuita chakanakira vafambi vanongwarira uye meseji kune avo vanoramba kufunga nezve kuchengetedzeka kwevamwe kugara pamba.